Maninona no tsy mahomby ny sahan'olon-kafa? Martech Zone
Talata, Oktobra 16, 2012 Talata, Oktobra 16, 2012 Jenn Lisak Golding
Mpamatsy teknolojia mahafinaritra anay,Formstack , dia nanao fikarohana be dia be momba hiteraka fiovam-po bebe kokoa amin'ny fampiasana endrika. Niara-niasa tamin'ny fanangonana ny fikarohana tsara indrindra manaporofo izany izahay ny sahan'endrika kely kokoa dia mitarika fiovam-po. Raha ny marina dia hitanay fa ny tahan'ny fiovam-po tsara indrindra dia misy raha roa na telo ny isan'ireo saha tokony hofenoin'ny mpampiasa.
Ny infographic dia manome koa torohevitra vitsivitsy momba ny fanatsarana ny anao endrika endrika handefasana fiovam-po. Voaatsara amin'ny endriny rehetra ve ny endrikao? Ampy ve ny endritsoratra? Ireo no fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao rehefa mitady hamorona endrika mahomby ianao.
Inona ny hevitrao? Mitolona amin'ny firy ny sahan'endrika tokony hanana?
Tags: fiovam-pofanavaozana fiovam-poendrika sahatenyformstackisan'ny saha
I Jenn Lisak Golding dia Filoham-pirenena sady CEO an'ny Sapphire Strategy, maso ivoho nomerika iray izay manafangaro data be dia be miaraka amina intuition back-traikefa hanampiana ny marika B2B handresy mpanjifa bebe kokoa ary hampitombo ny ROI marketing azy ireo. Mpahay tetikady iray nahazo loka, i Jennifer dia namolavola ny Sapphire Lifecycle Model: fitaovana fanaraha-maso miorina amin'ny porofo ary rafitra ho an'ny fampiasam-bola amin'ny marketing avo lenta.
16 Okt 2012 amin'ny 1:01 PM
Fampahalalana mahafinaritra, fantatrao ve raha tsy mitovy ny valiny amin'ny tranokala B2B raha oharina amin'ny B2C ?. Ny tiako holazaina dia ny mpampiasa B2B mora mirona hameno ireo takelaka?
16 Okt 2012 amin'ny 4:24 PM
Ny data izay nomena an'ity dia miresaka momba ny tranokala B2B. Na izany aza, raha nandinika ny angon-drakitra avy amin'ny B2B mifanohitra amin'ny B2C izahay, dia tsy nisy taonina ny fahasamihafana, afa-tsy ny raharaham-barotra. Raha misy safidy ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny maha vahiny azy fa tsy manome ny mombamomba azy ireo ary mamorona kaonty dia tena hiditra ho mpitsidika izy ireo. Heveriko, mifototra amin'ny zavatra niainako niaraka tamin'i Formstack sy amin'ny naha-mpampiasa ahy, dia fiheverana mety ny mieritreritra fa ireo mpampiasa B2B dia mora mihazona endrika.
Oct 17, 2012 amin'ny 4: 38 AM
Misaotra anao tamin'ny fanazavana